Isizinda se-Ultrasonic se-Quillaja Saponins - I-Hielscher Ultrasound Technology
Izitshalo ze-Saponin zomuthi we-Quillaja saponaria Molina yizona eziwumthombo oyinhloko we-saponins yezicelo zezimboni.
Isizinda se-Ultrasonic se-Quillaja saponins sithela kuma-saponins aphezulu.
Isizinda se-ultrasonic yindlela ephumelelayo kakhulu yokukhiqiza isivuno esikhulu se-Quillaja saponin esikhishwe ngesikhathi esifushane.
I-Quillaja Saponin Extract
Ukukhishwa kwe-Quillaja saponin (izifanekiselo: iziqu ze-quillaia, i-bois de Panama, ama-extracts e-Panama, izitshalo ze-quillai, izitshalo ze-quillay bark, izitshalo ze-soapbark) into ekhishwe emthini we-Quillaja Saponaria Molina (Q. saponaria). I-Quillaja extract iqukethe ama-saponin angaphezu kuka-100 e-triterpenoid. I-saponins esemqoka ikhona yi-glycosides ye-quillaic acid. Ezinye izingxenye ezinkulu ziyi-polyphenols nama-tanins kanye namanani amancane ama-usawoti noshukela. I-Quillaja extract ikhiqizwa etholakala ngokukhipha ama-aqueous of bark ngaphakathi ngaphakathi noma izinkuni zeziqu ezifuthiwe namagatsha e-Quillaja saponaria. Njengoba i-Quillaja saponin iqoqa kokubili, ama-surfactants kanye nama-phenolic compounds, ayathandeka ngokweqile ekwakheni izithako zokudla ezibucayi kanye nokuvikelwa kwabo ngokumelene ne-oxidation.
Ukusetshenziswa kwama-saponin njengama-emulsifiers wemvelo ekhuphuka kakhulu ngenxa yesidingo esikhulayo semikhiqizo enempilo, engokwemvelo ngaphandle kwezihlanganisi zokwenziwa. Ama-saponin e-Quillaja angama-emulsifiers amakhulu ama-emulsions we-O / W kanye nama-nanoemulsions futhi abonise imiphumela emihle kakhulu emafomeni ahlukahlukene afana neziphuzo namafutha amafutha. Ukusetshenziswa okuvamile kwe-Quillaja saponin kukhishwa yi-emulsification Amafutha e-CBD, iziphuzo ezingapheli kanye nemikhiqizo yokudla enezicathulo. I-quillaja saponins ingasetshenziswa yodwa noma ihlanganiswe namanye ama-emulsifying agents.
I-Q-Naturale® iyinhlanganisela yokudla okusekelwe ku-Quillaja bark saponins, evunyelwe yi-FDA njenge-emulsifier ephumelelayo yokudla neziphuzo. Ngaphandle kwe-agent e-emulsifying, ama-saponin ase-Quillaja asetshenziselwa ukukhiqiza imithi ye-antibacterial, anti-virus, antitifungal, antiparasitic, antitumor, hepatoprotective, kanye nezakhiwo ze-immunoadjuvant.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Quillaja Saponin Extraction
I-solvent eluhlaza (ie amanzi)
Ucwaningo lwe-Case of Ultrasonic Extraction of Saponins kusuka kuQuillaja
Ukuze ulungiselele ukukhishwa kwe-Quillaja ephezulu, okuhlinzekela imisebenzi efunayo njengokudla nokufakelwa kwe-pharma, ama-phytochemicals asebenzayo, okuyi-saponins, kumele abe ngabodwa. I-Quillaja saponin iyi-sapiterin e-triterpene eseceleni kwegxolo lomuthi wesobho. I-cavitation ye-Ultrasonic ikhuthaza isizinda ngokwenza ngcono ukuxhumana phakathi kwama-solids kanye noketshezi futhi ukwandisa ukudluliswa okukhulu.
Cares et al. bonisa ekutadisheni kwabo ngokucacile ukuthi ultrasonically basiza isizinda (UAE) kungaba ngcono inqubo yokukhipha imigomo bioactive kusuka Quillaja Saponaria Molina. Basebenzisa izinkuni ze-Quillaja bese bakha ama-chips futhi bakhipha ama-saponins emanzini besebenzisa i-sonication, ukuze umkhiqizo wokugcina ufake kuphela izithako zemvelo nezinto zokusetshenziswa futhi zingasetshenziswa ekukhiqizeni ukudla. Njengendlela yokufakelwa engeyona ye-thermal, izinga lokushisa lokushisa ngenkathi i-ultrasonication ihlale iqhutshwa ngo-20ºC (68ºF). Ukukhishwa kwemikhiqizo kwande kakhulu kakhulu ngesikhathi sokuqeda ingane kusukela kumaminithi angu-10 ukuya kwangu-30. Ukukhiqizwa kwemaminithi angu-20 ngo-20ºC kusizinda esisizwa nge-ultrasound kwakufana nalabo abazuzwa ngendlela evamile yokukhishwa amahora ama-3 ku-60ºC.
Amadivayisi we-Ultrasonic asetshenziselwa ukulungiselela ama-emulsions ahlala isikhathi eside e-o / w esebenzisa i-Quillaja saponin ekhipha ukuzamisa i-emulsion emzimbeni nangamakhemikhali. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsification!
Umbukiso wombala wedijithali uvumela ukulawulwa komsebenzisi-friendly of the imishini ultrasonic. Amasistimu ethu akwazi ukuletha kusuka phansi kuya kuma-amplitudes aphakeme kakhulu. Ukukhishwa kwamakhemikhali e-astaxanthin, sinikeza i-sonotrodes ekhethekile ye-ultrasonic (eyaziwa ngokuthi i-ultrasonic probes noma izimpondo) ezilungiselelwe ukuhlukaniswa okubucayi kwezinto eziphezulu ezisebenzayo. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
MG Cares, Y. Vargas, L. Gaete, J. Sainz, J. Alarcón (2009): Ukuxhaswa nge-ultrasonically Ukukhishwa kwezimiso eziphilayo ezivela ku-Quillaja Saponaria Molina. I-International Congress ku-Ultrasonics, i-Universidad de Santiago de Chile, ngoJanuwari 2009.
J. Deise Fleck, A. Heemann Betti, F. Pereira da Silva, EA Troian, C. Olivaro, F. Ferreira, uS. S. Gasparin Verza (2019): Amapayipi aseQuillaja saponaria noQuillaja brasiliensis: Okunye okuphawulekayo kweMikhali kanye nemisebenzi yezinto eziphilayo. Ama-molecule. 2019 Jan; 24 (1): 171.
K. Kaur, R. Kumar, SK Mehta (2015): Ukwakhiwa kwe-saponin i-nanoemulsion eqinisiwe nge-ultrasonic indlela kanye nendima yayo ukuvikela ukuchithwa kwe-quercitin kusuka ekukhanyeni kwe-UV. Ultrasonics Sonochemistry 31, 2015.
I-RRT Majinda (2012): Ukukhishwa nokuhlukaniswa kweSaponins. Ku: Satyajit D. Sarker noLutfun Nahar (ama-eds.), Ukukhishwa kwemikhiqizo yemvelo, Izindlela ze-Molecular Biology, Vol. 864, 2012.
N. Riquelme, RN Zúñiga, C. Arancibia (2019): Ukuzinza komzimba we-nanoemulsions nge-mix emulsifier: Ukushintshwa kwama-80 phakathi kwe-quillaja saponin. LWT – Isayensi Yezokudla Nezobuchwepheshe 111, 2019. 760-766.
Mayelana nomuthi we-Quillaja kanye namaSaponins ayo
Umuthi weCuillaja Saponaria Molina, owaziwa nangokuthi iSaiptree waseNingizimu Afrika, ukhula ngokwemvelo eChile. Umuthi we-Quillaja Saponaria (umndeni waseRosaceae) uyisihlahla esikhulu esihlala njalo sinamahlathi aminyene, esizwe emazweni amaningana aseNingizimu Melika, ikakhulukazi eBolivia, eChile nasePeru.
Ukukhishwa kwe-Quillaja saponin kuqukethe ikakhulukazi i-saponins kodwa futhi i-polyphenols, i-tannins, kanye nosawoti noshukela ngobuncane. Ama-saponin ama-Quillaja yizinhlayiya ezakhiwe nge-nucleus ye-triterpenic enezintambo ezimbili zeshukela. Lezi zingxenyana zamashukela zinika i-saponins indawo ye-hydrophilic (= ingancibilika emanzini), kuyilapho i-nucleus ye-triterpenic i-hydrophobic (= amanzi aphikisayo). Kulezi zindawo, i-amphotic tenside, eyenza ama-saponin abe yi-non-ionic tensoactive, okwenza ukunciphisa ukuphazamiseka kwamandla, ukusungulwa kwemikhiqizo ye-hydrophobic ngezixazululo ezinamakhemikhali kanye nokubunjwa kwe-micro- / nano-emulsions.
Emthini weQuillaja, igxolo liqukethe cishe. 5% inani eliphakeme lama-saponin, kanti izinkuni zinokuqukethwe kwe-approx. 2% we-saponins.
Njengoba ama-saponins ayizinto zemvelo ezinezindawo ezinhle ezinamagagasi nezishukumisayo, zivame ukusetshenziswa njengama-fojenzi ekudleni, iziphuzo kanye nemboni kabhiya, njengezithako zezimonyo, njengezengezo kuma-agrochemicals nasekuphakelweni kwezilwane, nanjengezokugoma emithini yokugoma.
Ukukhiqizwa kwezingqimba ze-quillaja kwenziwa nge-extraction aqueous; ayikho enye i-solvents esetshenziselwa ukukhiqizwa kwayo. Umkhiqizo wokugcina, noma ukukhishwa okungahlanzekile noma okuhlanjululwayo, ekwakheni uketshezi noma uketshezi kuphela kuhlanganisa izithako zemvelo nezinto zokusetshenziswa, okuvunyelwe ukusetshenziswa kwazo ekukhiqizeni ukudla. (Cares et al. 2009)
Igama elithi saponin lisuselwa egameni lesiLatini elithi sapo, elisho insipho. Ama-saponins ayizimboni ze-phytochemicals, etholakala ikakhulukazi kodwa hhayi kuphela ezitshalweni, ezibonisa izici ezinamandla, futhi ziqukethe ama-aglycones enama-polycyclic anamathiselwe emaketangeni ayisithupha noma ngaphezulu. Ingxenye ye-aglycone, ebizwa nangokuthi i-sapogenin, i-steroid (C27) noma i-triterpene (C30). Ikhono lokukhukhumeza lamapayinoni libangelwa ukuhlanganiswa kwe-hydrophobic (fat soluble) sapogenin kanye nengxenye yeshukela e-hydrophilic (amanzi eneshukela). [Majinda, 2012: iphe. 515] Izinto zokutshala ezinama-saponin aphezulu asetshenziswe njengama-emulsifying agents. Izibonelo ezivelele zezitshalo ezicebile nge-saponins ziyi-soapbark (i-Quillaja saponaria; i- Rosaceae), i-soapwort (iSaponaria officinalis; i-Caryophyllaceae), ne-shikakai powder (i-Gleditsia sinensis; i-Leguminosae). Ama-saponin yi-amphipathic glycosides enesisindo esikhulu samangqamuzana, esiye sakha i-one noma ngaphezulu e-hydrophilic glycoside engxenyeni ehlanganiswe ne-lipophilic triterpene derivative. Ikakhulukazi embonini yezokwelapha, i-saponins iye yakhanga kakhulu ngenxa yezindawo zazo eziphilayo ezibandakanya ikhono labo lokugqugquzela ukuphendula kwamagciwane, okwenza kube yizikhulu ezikhethiwe ze-adjuvants.
Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Ultrasonic Extraction
Isizinda esisizwa nge-ultrasound (UAE), futhi sono-extraction, iyindlela ephumelelayo kakhulu yokutshala okuluhlaza ukuze kuhlukaniswe izinto eziphilayo ezifana namaprotheni, amavithamini, ama-polyphenols, i-pigments yemvelo, i-lipids njll ezivela ematrices ezitshalo. Isizinda se-ultrasonic sisekelwe esimisweni sokusebenza se-acoustic cavitation.
Uma ama-ultrasound ama-intensity asetshenziswa kuma-liquid systems, i-acoustic cavitation iyenzeka, okuyinto yenzalo yesizukulwane, ukukhula nokugcina ukuqhuma kwamabhulebhu avumayo (bheka isithombe ngezansi). Phakathi nokusabalalisa kwamagagasi e-ultrasound, ama-bubbles avumayo aqhubezela futhi akhule aze afinyelele iphuzu lapho engakwazi ukuthola amandla engeziwe. Esiqongweni se-bubble ukukhula bawela ngokuhlukumezayo, okubangela ukushisa kwamakhemikhali, amakhemikhali, kanye namakhemikhali. Imiphumela yemishini ihlanganisa ukucindezelwa okukhulu kuze kufike ku-1000atm, turbulences, kanye ne-shear force force. Lezo zinsizakalo ziphazamisa izindonga zeseli futhi zithuthukise ukudluliswa okukhulu phakathi kwe-cell yangaphakathi kanye ne-solvent ekhishwa ama-bioactive compounds ku-liquid ezungezile (ie solvent).
I-ultrasonic eqinile-uketshezi oluthile lwamakhemikhali avela ku-botanicals nesisindo samasosha iye yacwaningwa kahle. Ukusetshenziswa kwamagagasi amakhulu kakhulu e-ultrasonic kukhuthaza izinqubo zesikhulumi kakhulu. Ngaphandle kwenqubo yokuqinisa – okuholela ekuvuneni okuphezulu nesikhathi esifushane sokukhishwa – ukuchithwa okushisayo nokulahlekelwa kwamazinga okushisa okushisa okuvinjelwayo kuvinjelwe ngoba i-ultrasonication ingelashwa okwemvelo. Ngaphezu kwalokho, isizinda se-ultrasonic sinemali ephansi yokutshalwa kwezimali kanye nokusebenza, kunciphisa ukusetshenziswa kwe-solvents kanye / noma kuvumela ukusebenzisa ama-solvents ama-greener, okwenza kube nezindlela zokonga nezomvelo-friendly friendly. Ukukhipha izindlela ezijwayelekile zokukhipha, isisetshenziswa se-ultrasonically-assisted (UAE) seyamukelwe embonini yokudla ukuze kuvezwe ama-bioactive ngemali ezuzisayo.